Warshad Sheybaarka Kiimikada & Qurxinta Maalinlaha ah - Shiinaha Shiinaha Kiimikada & Sheybaarka Labeler-saareyaasha, shirkado cusub
S911 waa xariijin wax soo saar isku qurxin badan leh gaar ahaan calaamadeynta lick-ul iyo calaamadeynta beeyada leefleefta, mashiinkan calaamadeynta xawaaraha sare waa kaaliyaha awooda badan ee casriyeynta wax soo saarka ballaaran.
Nidaamka quudinta toosan iyo calaamadeynta
quudin toos ah iyo calaamadeynta walxaha fidsan
S-conning LS-823 mashiinka calaamadeynta otomaatiga ah wuxuu ku habboon yahay dhalooyinka wareega, ma aha oo kaliya hal dhinac calaamadeyn, laakiin sidoo kale wuxuu ku habboon yahay calaamadeynta labada dhinac.
Gaar ahaan ku habboon qurxinta, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed, cuntada iyo codsiyada baakadaha warshadaha kale.
Mashiinka Calaamadeynta Xawaaraha Sare & Sare ee hoose waa calaamadeyn si otomaatig ah loogu talagalay oo ka baxsan sanduuqyada
Shaashadda taabashada Humanized: Hawl fudud oo toos ah, shaqooyin dhammaystiran iyo hawlo caawimaad khadka toosan ah.
Silsilad labalaab ah oo leh qalabka wax lagu hagaajiyo si loo hubiyo dhexdhexaadnimada dhalooyinka fidsan iyo kuwa laba jibbaaran.
Qalabka suunka jilicsan ee khaaska ah waa mid adag oo isku mid ah suunka ugu weyn ee qaada si loo hubiyo xasilloonida toosan ee dhalada cadaadinta iyo gudbinta.
Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi,